Simba shongwe mhando yesimbi mamiriro furemu iyo inochengeta imwe yakachengeteka chinhambwe pakati pekutsigira makondakita, pasi waya uye zvivakwa zvepasi mumutsetse wekutepfenyura. Kubva pakuumbwa: general angle simbi shongwe, simbi pombi pole uye simbi chubhu yakatetepa base base tower. Angled simbi shongwe inowanzo shandiswa mumunda, uye simbi pombi pole uye simbi pombi yakatetepa base base tower inowanzo shandiswa mudhorobha nharaunda nekuti pasi nzvimbo idiki pane kona yesimbi shongwe.
Electric angle simbi yeshongwe mhando yesimbi simbi iyo inogona kuchengeta imwe yakachengeteka daro pakati pevatsigiri vafambisi uye zvivakwa zvepasi mumutsetse wekutepfenyura. Zvinoenderana nechimiro chayo, inogona kuve yakakamurwa kuita mashanu marudzi: waini mukombe mhando simba nhare, kati musoro mhando simba nhare, kumusoro mhando simba nhare, yakaoma mhando uye bhaketi mhando. Zvinoenderana nechinangwa, inogona kukamurwa kuita tambo yemhando yesimba, yakatwasuka tambo yemhando yeshongwe, kona mhando yemagetsi shongwe uye shanduko yemhando yesimba shongwe Iyo chimiro cheshongwe (kutsiviwa kwekondakita chikamu chinzvimbo shongwe), terminal simba shongwe uye kuyambuka simba shongwe ndeyekuti dzakasiyana shongwe mhando ndezvemuchadenga truss chimiro, uye nhengo dzinonyanya dzinoumbwa imwechete equilateral angled simbi kana yakasanganiswa angled simbi. Q235 (A3F) uye Q345 (16Mn) inowanzo shandiswa. Kubatana kuri pakati penhengo kunoitwa kwakasungwa mabhaudhi, uye iyo shongwe yese inosunganidzwa nekona simbi uye simbi inobatanidza Zvimwe zvikamu zvakaita seshongwe tsoka zvakasunganidzwa kuita musangano nematareti mazhinji esimbi. Naizvozvo, zviri nyore kwazvo kune iyo inopisa galvanizing, anticorrosion, kutakura uye erection. Kune iyo shongwe ine kukwirira kuri pasi pe60m, chipikiri chetsoka chinofanira kuiswa pane chimwe chezvinhu zvikuru zveshongwe kuti zviite kuti vashandi vekuvaka vakwire shongwe.
Zvadaro: Kutaurirana shongwe
Stainless Simbi Kutaurirana Shongwe
Simbi Kutaurirana Shongwe
Kukurukurirana shongwe Kutaurirana shongwe ndezve rudzi rwechiratidzo unoparadzira shongwe, inozivikanwawo seyambiro yekuparadzira shongwe kana shongwe yechiratidzo. Basa rayo guru ndere kutsigira chiratidzo uye nerutsigiro chiratidzo chinofambisa kanyanga. Inoshandiswa mumatare ekutaurirana akadai seChina Mobile, China Unicom, telecom, kutakura satellite satellite positioning system (GPS). 1, Hunhu uye kushandiswa kwekutaurirana shongwe 1. Kutaurirana shongwe: iyo yakakamurwa pasi ...
Kutaurirana kwenzvimbo shongwe
Kutaurirana nzvimbo Nhaurirano nharaunda nharaunda inosanganisira kumhara zvakajairika nzvimbo yekutaurirana shongwe uye kumhara kunaka kwekuenzanisira mamiriro enzvimbo. Iine hunhu hwese hwekumhara zvakajairika nzvimbo shongwe parizvino. Ndiwo mubatanidzwa wakakwana wepasi wakajairika nzvimbo yekutaurirana shongwe uye yekushongedza yakavanzwa kanyanga, uye ndiko kuwedzera kwekuwedzera nekuvandudza zvigadzirwa zvekambani yedu kune yakakwira nzira. Pfungwa huru ndeye ...
Magetsi Angle Simbi Shongwe, Magetsi Angle Simbi Towers, Kanzuru yeKutaurirana kweMasipare, Angle Simbi Simba Rinofambisa Shongwe, Tube Simbi Sisitimu, Prefab Simbi Zvivakwa,